New Zealand na -atụ anya ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi 90% iji kwụsị mmachi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ ọhụrụ New Zealand » New Zealand na -atụ anya ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi 90% iji kwụsị mmachi
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ ọhụrụ New Zealand • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Ịzụ ahịa • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ndị gbara ọgwụ mgbochi ọrịa zuru oke ga -enwe ike ijikọ ezinụlọ na ndị enyi, gaa n'ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọ andụ andụ wee mee nkwenye na ntụkwasị obi karịa ihe ha hụrụ n'anya.
New Zealand ga-akwụsị mgbochi coronavirus mgbe ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi ruru pasent 90.
Ebumnuche a na -eme ka mpaghara gbasaa gafee mba ahụ ma nyere aka lebara okwu gbasara ego anya n'etiti mpaghara ọ bụla.
Ọtụtụ nnwere onwe ndị ọzọ na -enwe agaghị eru ndị na -agbabeghị ọgwụ mgbochi.
Dabere na New Zealand Prime Minista Jacinda Ardern, ọ ga-ewe 90% ọnụ ọgụgụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa iji kwụsị mmachi COVID-19 siri ike na mba ahụ.
“Edobela ebumnuche nke 90% ịgba ọgwụ mgbochi zuru oke n'ofe mpaghara Health Board (DHB) dị ka ihe dị mkpa iji kpalite ịkwaga obodo n'ime usoro ọhụrụ a. Ebumnuche a na -eme ka mgbasa ozi mpaghara dị mma gafee mba ahụ ga -enyekwa aka idozi nsogbu ịha nhatanha n'ime mpaghara ọ bụla, ” Ardern kwuru na nkwupụta ewepụtara taa.
“Ndị gbara ọgwụ mgbochi ọrịa zuru oke ga-enwe ike iso ndị ezinụlọ na ndị enyi jikọọ ọzọ, gaa ụlọ mmanya na ụlọ nri ma jiri ntụkwasị obi na ntụkwasị obi mee ihe ha hụrụ n'anya. Usoro nchekwa ọhụrụ COVID-19 na-esetịpụ ụzọ na-akwụghachi ọnụ ọgụgụ na-eto ngwa ngwa nke ndị New Zealand gbara ọgwụ mgbochi nwere nnwere onwe ka ha wee mee ndụ ha n'enweghị nsogbu, ” Ardern gbakwunyere.
Ugbu a, 86% nke New ZealandOnu ogugu ndi mmadu enwetala ogwu mbu nke ogwu COVID-19, ebe ihe dika 69% agbaala ogwu n'uju.
Prime Minista Ardern kwuru, "Ọ bụrụ na ịmabeghị ọgwụ mgbochi, ọ bụghị naanị na ị ga-anọkwa n'ihe ize ndụ nke ijide COVID-19, mana ọtụtụ nnwere onwe ndị ọzọ na-enwe agaghị eru."
New Zealand edekọla ikpe 134 ọhụrụ COVID-19 n'ime awa 24 gara aga, ọnụ ọgụgụ kachasị otu ụbọchị kemgbe mmalite nke ọrịa a.
Dabere na New ZealandMinistri ahụike, obodo edebanyela ikpe 5,449 COVID-19 yana mmadụ 28 nwụrụ.